अष्ट्रेलियाको न्यूसाउथवेल्समा डढेलोको प्रकोप जारी, ६ सय विद्यालयहरु बन्द « MNTVONLINE.COM
अष्ट्रेलियाको न्यूसाउथवेल्समा डढेलोको प्रकोप जारी, ६ सय विद्यालयहरु बन्द
अष्ट्रेलियाको जंगलमा लागेको डढेलो सिड्नीको बाहिरी क्षेत्रसम्म आइपुगेको छ । अहिले पनि तीन सय ठाउँहरुमा आगलागी जारी रहेको आकस्मिक सेवाका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । कम्तिमा एक लाख हेक्टरमा डढेलो फैलिएको उनीहरुले जनाएका छन् । डेढेलो नियन्त्रण टोलीले अहोरात्र खटिएर यसलाई रोक्ने प्रयास गरेपनि यसले कैयौं घरहरु क्षति गराएको छ । न्यूसाउथवेल्समा राज्यव्यापी आपतकाल घोषणा यसअघि नै गरिसकिएको थियो । सिड्नीको मुख्य शहरबाट उत्तरतर्फ १५ किलोमिटरकै दूरीमा पनि डढेलो आइपुगेको छ । स्थानीय तुर्रामुरा क्षेत्रमा रहेको मक्वाएरी युनिभर्सिटी क्षेत्रमा डढेलो नियन्त्रक हवाईजहाजबाट डढेलो रोक्ने गुलावी रंगको केमिकलसहितको पानी खसाइएको छ । आगलागी रोक्ने प्रयासमा अग्नी नियन्त्रणहरु घाइते समेत भएका छन् । न्यूसाउथवेल्सको ग्रामीण आगलागी नियन्त्रण सेवाका आयुक्त सेन फिजसिमोन्स भन्छन्, हामीले धेरै गर्न बाँकी छ । मौसम अझ बढी खराब हुनुअघि नै यी नियन्त्रण गर्न कठीन हुने हाम्रो अनुमान छ । पानी पर्ने कुनै लक्षण छैन यसले चिन्ता बढाएको छ ।
डढेलोको त्रासका कारण न्यूसाउथवेल्सका ६ सय भन्दा बढी विद्यालयहरु बन्द गरिएको छ । शुक्रबार डढेलो संकट घोषणा गर्नेबेलासम्म तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ भने १ सय ७० भन्दा बढी घरहरु जलेर क्षतिग्रस्त भएका छन् । आगोलागी नियन्त्रणका लागि तीन हजारभन्दा बढी नियन्त्रकहरु खटिएका छन् । उनीहरुलाई सहायता गर्नका लागि न्यूजिल्याण्डबाट, अन्य राज्यहरुबाट समेत नियन्त्रणहरु आइरहेका छन् । साथै उनीहरुलाई सेनाले समेत सघाएको छ । अधिकारीहरुले अहिलेको न्यूसाउथवेल्सको डढेलोलाई सन् २००९ को भिक्टोरियाको आगोलागीसँग तुलना गरिरहेका छन् जतिबेला १ सय ७३ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए ।
अन्य स्टेटमा के भएको छ ?
यसैबीच, क्वीन्सल्याण्डले पनि डढेलो संकटकाल घोषणा गरेको छ । जहाँ ५५ ठाउँमा डढेलो लागेको बताइएको छ । यस्तै साउथ अष्ट्रेलियामा पनि दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा डेढेलो लागेको छ । वेष्टर्न अष्ट्रेलियामा पनि सावधानी अपनाउनका लागि अधिकारीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
बोलिभियाकी अन्तरिम राष्ट्रपति जेनिन अनेज चाभेजलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण
बोलिभियाकी अन्तरिम राष्ट्रपति जेनिन अनेज चाभेजलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्थानीय समयानुसार बिहीबार उहाँलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । “मलाई
जब मंगोलियाकी महिलाले विमानभित्रै दुई बच्चालाई जन्म दिइन्
बाढी पहिरोलाई कारण देखाउँदै नेकपा स्थायी कमिटी बैठक एक साता स्थगित
एन्फाले सेनालाई दियो १४ लाख बराबरको खेलसँग सम्बन्धित सामग्री
बृद्धाको रकम क्रेटिट कार्डबाट चोरेको आरोपमा एक नेपालीलाई १८ महिने जेल सजाय
भारतमा रही विभिन्न ईन्टरनेट कल मार्फत अष्ट्रेलियाका नागरिकहरुलाई ठगी गर्ने गिरोहको एक सदस्यका रुपमा अष्ट्रेलियन
मेलबर्नमा ४ जना नेपाली विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमण, २ जना नतिजा कुर्दै !
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा बसोबास गर्ने ४ नेपाली विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । मेलबर्नको ग्लेनरोय क्षेत्रमा
१४ जुलाईको फ्लाईटको सम्बन्धमा एउटा सम्पूर्ण कार्यक्रम LIVE
अष्ट्रेलियाबाट नेपाल जान लागेको १४ जुलाईको फ्लाईटको सम्बन्धमा एउटा सम्पूर्ण कार्यक्रम । अहिलेसम्म २५५ भन्दा
जुलाई १४ तारिख अष्ट्रेलियाबाट नेपाल जाने तयारी, भाडा ११५१ अमेरिकी डलर !
नेपाली दूतावास क्यानबेराको संयोजनमा एनआरएन अष्ट्रेलियाको नेतृत्वमा अष्ट्रेलियामा रहेका विभिन्न सामूदायिक संघसंस्थाको संलग्नतामा आगामी १४